HEGERLS kutyaira zvine mutsindo
Dhiraivha-in racking inonzi zvakare corridor-mhando racking, yakasanganiswa mamiriro, yakasarudzika yakakwira-yakasimba simba-mumabhureki, yakakwira-simba dhiraivha-mune danda, mafuremu akabatana kumusoro kumusoro matanda nemabhaudhi & nzungu.
Iyo yakadzika yeimwe chete mota yekutyaira-in racking iyo iri kumadziro haifanire kuve inopfuura nhanhatu nzvimbo dzemapallet, uye iyo yemaviri mativi ekutyaira-mukati inofanirwa kunge iri pasi pegumi nemaviri mapallet nzvimbo kuti ive nechokwadi chekutakura kugona kweforiklifts uye kugadzikana. Racking.
Izvo zvakanaka kugadzira mota-iri pasi pane H11000mm nekuda kwayo isina kunyatsogadzikana inova iyo isina kusimba kana ichienzaniswa neimwe racking system. Iyo drive-in racking inofanirwa kuve yakagadzirirwa musana, pamusoro muchinjikwa matanda, nezvimwewo kudzikamisa iwo machira.
Rudzi urwu rwekunamatira rwakashongedzwa, kushandisa zvizere nzvimbo yekuchengetera; zvese zviri zviviri "kutanga kutanga kubuda" uye "kutanga kwekupedzisira kubuda" zviripo, zvinokodzera kuchengetera mashoma marudzi enhumbi ane huwandu hwakawanda. Inoshandiswa zvakanyanya mumukaka, indasitiri yekumwa, uye zvakare kugamuchirwa nekutonhorera kutonhora.
◆ Yakakwira aruminiyamu racking yekuchengetedza system;
◆ Midzi yekuwanira modhi: yekutanga-in-yekupedzisira kunze uye yekutanga-mu-yekutanga-kunze sarudzo;
Times Kaviri kakapetwa nhovo nzvimbo dzekuchengetedza pallet racks
◆ Shandisa yakasimba yakasimba simbi simbi senge mbishi zvinhu.
◆ Ose maviri RAL kodhi kodhi / kwakakurudzira iripo;
Kureba kwakagadziriswa ne50mm / 75mm pani;
◆ Rigid danda rinobatanidza;
Op Tora otomatiki yekutengesa yekugadzira maitiro;
◆ Kushongedza nemhando yepamusoro mabhaudhi & nzungu;
◆ yemahara 3D dhizaini yemifananidzo.
Pashure: HEGERLS imba yekuchengetera mezzanine racking
Zvadaro: HEGERLS cantilever racking
Tyaira MuShuttle System